Nkeji nbuputa nkebi - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>ig>Nkeji nbuputa nkebi
Nkeji nbuputa nkebi
3. Usoro iji gbakee bplandatarecovery, ị ga - ahụ na Bplandatarecovery nwere ọrụ nke mgbake nkebi, dị ka egosiri n’okpuru:
Search furu efu. Nkebi
Tinye ebe mgbake nkebi
Mgbe mpịakọta nhọrọ maka ịchọọ nkebi furu efu ga-apụta, dị ka egosiri n'okpuru:
Bplandatarecovery Nhọrọ nkebi nchọnchọ
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ dị mma iji arụ ọrụ mgbake nkebi, mgbake ọsọ dị oke ọsọ, enwere ike ịghaghachi diski mbụ (enweghị nnomi ọzọ nke data agbakere), wdg.
Agbanyeghị, mgbake nkebi nwere ihe ndị dị elu achọrọ maka ndị ọrụ, yana ọ chọrọ nghọta ụfọdụ gbasara nkebi diski mbụ.In’akuku nkebi sistemụ, ekwesịrị ị attentiona ntị na mbido sistemụ na ihe ndị ọzọ. Isiokwu a anaghị aga n’ihu. Mkparịta ụka, ndị nwere mmasị nwere ike ịlele akwụkwọ enyemaka ntanetị na weebụsaịtị Bplandatarecovery. Maka ndị injinia data mgbake, ọ bụ ezie na ọrụ mgbake data nke software Bplandatarecovery n’onwe ya esiela ike, Agbanyeghị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na - adị mma mgbe ụfọdụ iji gbanwee parameters na-ezighi ezi na data isi na diski ike. Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-arụ ọrụ ndị yiri nke ahụ, a na-eji WinHex ngwanrọ ngwá ọrụ eme ihe n'eziokwu. Bplandatarecovery na-enye ọrụ mmezi akụkụ, nke nwekwara ike ịgbanwe data ahụ na diski ozugbo, yana ọrụ nke Bplandatarecovery management nke ngalaba, wdg, ọ na-agbanwe karịa WinHeex. , Nke ka adaba. Họrọ disk ma ọ bụ nkebi, pịa bọtịnụ òké aka nri, na menu ụzọ mkpirisi, họrọ “mepee ngalaba mpaghara 16,” dị ka e gosiri n’okpuru ebe a:
Bplandatarecovery fan Dezie mpaghara
Tinye ọrụ ngalaba na-edezi ma dezie data diski diski ozugbo
n'otu aka ahụ, ngalaba na-edezi mpaghara maka nkewa ma ọ bụ diski ike ga-apụta n'aka nri, dị ka ndị a Egosiputa:
Bplandatarecovery mpaghara panel panel
Ntụgharị na arụmọrụ nke ngalaba edezi ya na WinHex, ọrụ ndị ahụ na-adabakwa otu, mana jikọtara ya na ndị ọzọ Bplandatarecovery Ọrụ, mgbanwe ga-adaba adaba iji rụọ ọrụ. Beplandatarecovery na - akwado ihe nkesa Raid, ndị ọrụ nwere ike iji Bplandatarecovery rụgharịa Raid, wee nwetaghachi data, dị ka egosiri n'okpuru:
Server RAID mgbake
Main menu, tool-melite mebere RAID
Bplandatarecovery guzobere RAID
isi p. > Ndị ọrụ nwere ike ịgbakwunye draịva siri ike, dozie ihe dịka ụdị RAID, ma weghachite data mgbe ịkpụchara RAID mebere. Eweghachite RAID bụ arụmọrụ dị elu Ndị ọrụ na-amaghị RAID nwere ike ịkpọtụrụ ndị otu ọkachamara nke Bplandatarecovery iji duzie mgbake RAID n'ụzọ dị anya.
6. Eriri igwe data weghachite Virtual machine
A na-eji igwe ndị ọzọ arụ ọrụ etu esi eji Bplandatarecovery weghachite data nke igwe igwe ndị mebere? May nwere ike iche maka ịwụnye Bplandatarecovery na igwe mebere ma weghachite data…
mana a naghị atụ aro ka ị mee nke a. Methodzọ a abụghị naanị mgbarụ, mana oge ụfọdụ na-enwekarị nsogbu ndị ọzọ. Simplezọ dị mfe ma dị mma bụ ịgbanye Bplandatarecovery na ezigbo kọmpụta, wee pịa faịlụ diski mebere nke igwe mebere Mgbe ikpochara, ị nwere ike iweghachi data ahụ na diski ike dị ka diski nkịtị.
How to load the Virt disk diski: menu menu, diski ike-emepe faịlị disk diski ike, dị ka egosiri n’okpuru:
Jiri Bplandatarecovery iji mepee disk disk
Mgbe ituchara komputa diski ike, inwere ike weghachite data dika diski ike a mgbe a na - eche ugbu a Bplandatarecovery ma nwee ụdị ngwa mgbake data a siri ike.
PreDetechọpụta usoro egwu Hard disk dị mma na ịrụzi
NextU disk na-apụ n'anya na mberede n'oge eji